Kindle Reader for PC - Landa Manje & Qala Ukufunda - Ungakwenza Kanjani
Uma ufike kuleli khasi, kusho ukuthi ubusafuna izindlela zokulanda i-Kindle reader ye-PC. Ngakho-ke, uma sinaka, sizokuhamba ngezindlela ezilula zokufunda i-Kindle Books kwideskithophu. Kepha qala izinto kuqala! Ake siqonde masinyane ukuthi yini le nto emangalisayo ebiza i-Amazon Kindle?Yebo, mhlawumbe umfundi we-elektroniki othandwa kakhulu owenziwe yi-amazon, i-Kindle iyithuluzi lehadiwe. Ukubeka ngamagama alula, yileso siqeshana sobuchwepheshe esimangalisayo esikuvumela ukuthi uphathe izigidi zezincwadi usohambeni.
Ukuzigoqa ngaphansi kwengubo ethokomele, efudumele, ukuphuza inkomishi yekhofi, nokufunda i-e-book yakho oyithandayo ku-Kindle kubonakala kuyindlela engcono kakhulu yokusebenzisa izimpelasonto ezivilaphayo. Kodwa-ke, kuthiwani uma, ungenakho ukufinyelela kudivayisi yakho yohlobo okwamanje? Ngabe uzowuyeka umqondo ngaleso sikhathi? Siyabonga ku-Amazon! Njengokuhlala kunjalo, kuqhamuke nesixazululo esiyingqayizivele sabo bonke abafundi abakhuthele laphaya.
Ungazifunda kahle izincwadi zakho eziyizintandokazi ku-Kindle Cloud Reader noma ngokusebenzisa i-Kindle for PC. Uma ufuna ukusebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-Kindle for PC, mane ululande kukhompyutha yakho. Ngemuva kwalokho, ungasebenzisa i-akhawunti yakho ye-Amazon ukuvumelanisa wonke ama-e-book wakho we-Kindle kunoma iyiphi idivayisi oyithandayo. I-Kindle Cloud Reader, ngakolunye uhlangothi, iyenza lula inqubo phambili. Awudingi ukulanda noma iyiphi isoftware. Mane uthole ukufinyelela kuwo wonke ama-e-book wakho owathandayo usebenzisa isiphequluli sewebhu
Izici Zomusa we-PC:
Izici zicishe zifane nezedivayisi yomusa.
Umfundi angabeka kalula amabhukumaka, engeze amanothi, futhi aqokomise umbhalo.
Kulula kakhulu ukulungisa usayizi wemibhalo nokufometha amakhasi ngokwesidingo ngasinye.
Uhlelo lokusebenza luhambisana kakhulu nazo zonke izinhlobo ze-Windows, ngokwesibonelo, iWindows 7 to 10, Windows XP, Windows 2000, Windows 98, neWindows Me.
Nge-Kindle Cloud Reader, ngeke ucelwe ukulanda noma yiluphi uhlelo lokusebenza noma isoftware. Ungavele udlulise amehlo ku-Kindle e-book yakho oyithandayo bese uyifunda usebenzisa isiphequluli sakho sewebhu.Futhi, kungenzeka ufunde zonke izincwadi zakho Zomusa kunoma yiluphi olunye uhlelo lokusebenza lomfundi. Ukuphela kokufanele ukwenze ukususa i-Kindle DRM kulezi zincwadi ze-e.
Izinyathelo Zokulanda i-Kindle ye-PC:
Vula isiphequluli sakho bese uchofoza kulokhu isixhumanisi .
Manje, uzothola izinketho ezi-3, Landa ku-app esitolo, ukuthole ku-google play naku-Download kwe-PC ne-Mac. Chofoza kufayela le-Landa i-PC ne-Macinketho. hlola isithombe.
Manje, i-.exe yakho (ifayela elisebenzisekayo lamawindows PC) lizoqala ukulanda.
Ngemuva kokufaka i- 'Kindle for PC' faka imininingwane yakho bese ungena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Amazon.
Kwenziwe, Onke ama-ebook akho manje azovela kuhlelo lokusebenza lwe-Kindle.
Ungazifunda kanjani izincwadi ze-Kindle kwi-laptop noma kwikhompyutha yakho?
Uma usuvele unedivayisi ye-Kindle noma okungenani une-Kindle app efakwe kwenye idivayisi, ungamane ulande zonke izincwadi osuzithengile kuze kube manje.
Ungakhathazeki ngamanothi, amabhukumaka, nenye inqubekela phambili, ngoba lezi zinto zizodluliswa.
Manje, mane umane ukhethe okuthi Khetha Konke okubonakalayo ngaphansi kwezinketho zeLabhulali.
Ekugcineni, khetha ikhava yencwadi onentshisekelo yokuyifunda kwi-PC yakho.
Uma ungafisi ukulanda uhlelo lokusebenza lwe-Kindle kusistimu yakho, ungasebenzisa ngisho ne-Kindly cloud reader. Lokho kuzoxazulula inhloso yokungasebenzisi idivayisi yoMusa nokusebenzisa i-laptop esikhundleni salokho.
Izinyathelo Zokusebenzisa I-Kindle Cloud Reader:
Ngena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Amazon.
Khetha incwadi kulabhulali yakho.
Sebenzisa izinkinobho zemicibisholo ukuphenya incwadi.
Yilokho kuphela! Bona ukuthi kulula kanjani ukusebenzisa i-Kindle ku-Desktop.
Ukucinga Okuthile encwadini:
Indlela elula yokusesha okuthile encwadini ukuthayipha igama ebhokisini lokusesha elisekhoneni eliphezulu kwesokudla. Uma kwenzeka ungayitholi, hambisa isikhombisi sakho phezulu futhi kufanele sivele.
Ukushintsha Usayizi Wefonti:
Sebenzisa kalula inkinobho ye-Aa ukushintsha okuthandayo kufonti. Hambisa isikhombisi sakho ngaphezulu kwekhasi ukuze ubone ibha yamathuluzi. Ungasebenzisa ibha yamathuluzi ukushintsha indawo, umbala, amamajini, njll.
Ukwengeza izaziso namabhukumaka:
I-Kindle Cloud Reader futhi ikuvumela ukuthi ungeze okuvelele, ubeke ibhukhimakhi ekhasini, bese ufaka izaziso. Mane uchofoze isithonjana sebhukhimakhi kubha yamathuluzi bese ikhasi lakho lamanje lizobekwa uphawu lokubekisa. Ukugqamisa imisho noma isethi yamagama, mane ukhethe umusho bese ukhetha inketho yokugqamisa ezovela ngokuzenzakalela. Ukwengeza izaziso, khetha ingxenye, bese ufaka umbhalo wakho. Chofoza ku-Gcina ukuze uqede.
Amathiphu namasu wokusebenzisa i-Kindle App ye-PC:
Uma ufisa ukwenza ukulungisa kuzakhiwo zefonti nezekhasi, bese ukhetha inketho ethi 'Aa' phezulu kwewindi lohlelo lokusebenza.
Ungavula amakhasi ngokuswayipha noma ngokukhetha uhlangothi lwesobunxele noma lwesokudla kwesikrini. Izinkinobho zomcibisholo wangakwesokunxele nangakwesokudla kukhibhodi yakho nazo zenza umsebenzi ofanayo.
Ukuze ubeke ibhukhimakhi, udinga ukuthepha noma ukhethe ikhona elingaphezulu kwesokudla sekhasi. Ngokwenza lokhu, uzokwazi ukubona uphawu oluhlaza okwesibhakabhaka lapho. Lokhu kukhombisa ukuthi ubeke uphawu lokubekisa ekhasini ngempumelelo.
Uma ufisa ukubona okuvelele kwakho, amabhukumaka, njll. Bese ukhetha inketho ye-Show Notebook ekhoneni eliphezulu kwesokudla.
Ufuna ukwenza inothi? Qhafaza kwesokudla noma yikuphi ekhasini. Ungacindezela noma ubambe uma usebenzisa i-tablet. Uphawu lwekhadi lenkomba kufasitelana lesokunxele luzokusiza ekwakheni ama-flashcards.
Lesi bekungumhlahlandlela olula wokukusiza ngokusebenzisa i-Kindle ku-PC yakho. Ngiyethemba ukuthi uthola lawa ma-hacks awusizo uma ungaphethe idivayisi yakho ye-Kindle noma ufuna ukusebenzisa i-Kindle kudeskithophu. Uma ungumuntu osuvele usebenzise i-Kindle kwi-Laptop, yabelana ngempendulo yakho. Uma kukhona noma yini ofuna ukwabelana ngayo engaba usizo kwabanye abasebenzisi abafuna izindlela zokusebenzisa i-Kindle ku-PC, ziyilahle ebhokisini lokuphawula ngezansi. Sivulekile ukuvuselela lolu lwazi.
Faka i-iTunes ku-Windows